Farqiga Cagaaran | BGA
Iyada oo loo marayo khibradaha waxbarasho ee bannaanka, mashaariicda wada-shaqeynta adduunka ee dhabta ah, iyo fursadaha hoggaaminta kaladuwan, BGA wuxuu awood u siinayaa ardaydeena sidii ay u abuuri lahaayeen adduunyo cadaalad ah oo sii waara.
Xadka Dibedda ee Thompson Island
Waxaan ku faraxsanahay inaan nahay iskuul sannado badan iskaashi la leh Thompson Island. Dhamaan ardayda iskuulka dhexe waxay kusii nagaadaan Thompson Island si ay u helaan khibrad waxbarasho oo 3-maalmood soconaysa dayr walba iyo dhisida kooxda 1-maalin iyo khibrad hogaamineed guga kasta. Xudduudka 'Thompson Island Outward Bound' wuxuu muujiyaa xiisa badan wuxuuna u oggolaanayaa ardayda inay ka gudbaan fikradihi hore ee ay ka soo hooyeen wixii ay gaari lahaayeen.
Bandhigyo Isku-dhafan oo cagaaran
Waxaan ula tartameynaa ardaydayada dugsiga sare inay la jaan qaadaan arrimaha muhiimka ah ee deegaanka, bulshada, iyo dhaqaalaha inta aan awood u siineyno inay isbedel ku sameeyaan noloshooda iyo wixii ka dambeeya. Heer fasal kasta wuxuu si qoto dheer u qodaa qodobka joogtaynta iyada oo loo marayo khibradaha barashada dhabta ah ee dunida (safarada dibedda, xog aruurinta, wareysiyada, cilmi baarista) waxayna soo bandhigayaan natiijooyinkooda iyo xalka dhamaadka bandhigkooda sannadka. La soco muuqaalkeena !
Xirfada Sayniska Deegaanka iyo
Wadada Tacliinta Farsamada
Boston Green Academy waa dugsiga keliya ee sare ee ku yaal Dugsiyada Dadweynaha Boston ee bixiya barnaamij xirfadeed ee wadada cilmiga Deegaanka & Teknolojiyada. Ardayda dhammeeya dariiqaan waxay diyaar u yihiin inay sii wataan waxbarashadooda kulleej ama galaan shaqada xoogag kala duwan oo deegaanka ah sida khubarada tayada biyaha, saynisyahano deegaanka iyo injineerro, saraakiisha bulshada iyo gobolka, iyo ururada kale ee deegaanka si ay u baaraan arrimaha dhabta ah ee deegaanka deegaanka. . Ardayda ka qalin jabisa barnaamijka Wadada Sayniska Deegaanka waxaa lagu aqoonsan yahay Gargaarka Degdega ah iyo CPR, 10-saac OSHA shahaadada badbaadada guud ee warshadaha, iyo Howlgallada Qashinka Halista ah ee 40-ka saacadood ah OSHA. Ardayda ayaa waliba lagu tababaray biyaha qashinka iyo tikniyoolajiyadda biyaha la cabbo, waxayna diyaar u yihiin inay qaataan Hawl wadeennada Daaweynta Qashinka ee Dawladda Hoose ee Massachusetts iyo Fasalka I ee Cabitaanka Biyaha ee ay maamusho Gobolka Massachusetts. Barnaamijku wuxuu ku kasbanayaa aqoon-isweydaarsi 6 asbuuc ah oo lala yeelanayo urur deegaan ama shirkad ay doortaan. Halkan ka fiiri liiska koorsooyinka.
Senior Internships: During Term 4, all seniors complete a 6-week, full-time internship in a sustainability field of their choice.